Okuthrendayo kuleli hlobo lango-2022 | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 06/06/2022 10:25 | Kubuyekezwe ku- 07/06/2022 12:57 | Calzado, Ukunakekelwa komuntu siqu, imfashini, Amathrendi
Kuleli hlobo sinakho okuhle nenhle kakhulu futhi ezihlukahlukene cool kulo nyaka 2022. Awukwazi miss induduzo, ngezikibha ezingenalutho nemibala ethulisiwe kancane kancane futhi elula. Ngomugqa ovusa ukusimama kwemvelo kanye nezinto zokwakha eziphilayo, ahlala ehambisana namathrendi aleli hlobo lango-2022.
Kule ndlela sinochungechunge lwe-Icons UPedri Gonzalez we-Springfield, okuyinto kule nkathi, ifaka isandla ekwakhiweni kwesikhathi esizayo, ngezingubo ezenziwe ngezinto zokusetshenziswa kabusha kanye nobuchwepheshe obuvumela ukonga emanzini, amandla namakhemikhali. Ukuzinikela okukhulayo kanye nokukhathazeka ngokusimama kweplanethi.
Umkhuba waleli hlobo uhlanganisa izingubo eziningi zemidlalo, ukuziqhayisa ngokuba kuxege kakhulu kunasezinkathini ezedlule kanye nalezo zinto ezibalulekile ezisetshenziswa njenge izingubo ezivamile neziyisisekelo. Amaphrinti nawo awakwazi ukushoda, njenge ukukhanya, okuphefumulayo futhi ngaphezu kwakho konke izicathulo ezinethezekile. Sibuyekeza ama-nuances amancane abonisa isici ngasinye:
1 Izikhindi ze-Bermuda emadolweni
4 Ibhulukwe elide
Izikhindi ze-Bermuda emadolweni
Amabhulukwe yiwo ahlala ekhona ehlobo. Esikhathini esidlule kwakukhona i-predilection yama-shorts amafushane kakhulu, kodwa kulo nyaka ibhalansi ifunwa. Bagqamisa i ibhulukwe elinzima kakhulu, kuleyo ntofontofo eyengeziwe, nobude obufika emadolweni, ngaphandle kokubedlula.
Isakhiwo esibheja ngakho welula indwangu ye-denim, amabhulukwe eboya enziwe nge-cotton engu-100% futhi ama-shorts alula kakhulu, ane-nylon ne-spandex.
Leli hlobo uzibophezele ku- amathangi aphezulu, eyenziwe ngemichilo nokunye okuningi okunesibindi. Kodwa ama-t-shirts alula, ajwayelekile, anemikhono emifushane enziwe ngezinto ezigaywe kabusha ayakhethwa. I imibala ihlala ingathathi hlangothi futhi ihluke kakhulu, idalelwe kabusha zonke izinhlobo zokuthandwa, ngohlobo oluthile lokuphrinta noma uphawu. Uhlobo lwe-polo slim fit tFuthi akushiywa eceleni, ukubika isitayela esivamile, sezemidlalo kanye nenhle yezingubo.
Izikibha Njengomthetho ojwayelekile, bazoba ne- ukubukeka kwe-baggy nokukhulu ngokweqile, ukudala ukunethezeka okukhulu nesitayela. Umqondo uwukwakha i-silhouette entsha nekhululekile, nakuba izikibha eziphawula umzimba noma isitayela esincanyana.
Izigxobo azikwazi ukushoda, njalo amachords anoma yisiphi isitayela. Isungulwe ku impahla ye-piqué enokulingana okujwayelekile, enemikhono emifushane futhi enekholomu yomugqa we-kodak. Iningi yenziwe nge-cotton engu-100%. kanye nokuqanjwa kabusha kukakotini Ukotini Ongcono, isiphakamiso esisha sokuphinda kusetshenziswe izinto ezingavuthiwe.
Amajezi awakwazi ukushoda ngezinsuku noma ubusuku lapho ukushisa kungahambi. Kufanele babe nolayini wabo, kusukela kwabo Indwangu iyaphefumula futhi ikotini yemvelo, futhi enogqinsi oluncane kakhulu. Imibala yalesi sizini i-pastel kakhulu.
Amabhulukwe ethulwa nazo i-slim fit shape ngomklamo wamaphakethe amahlanu. Ngezindwangu ezivumela ukujuluka futhi zenziwe ngezinto ezicophelelayo. Sinabo nabo ukubukeka okushwabene noma okugugile futhi ngendlela engavamile, iwasha nge-ECO-WAH eyenziwa ngelaser.
ibhulukwe le-chino Zihlala zikuwo wonke amathrendi futhi ziye zazibeka njengengubo eguquguqukayo kakhulu. bonke nabo imibala ethambile yaleli hlobo kanye nezindwangu ngokuvumelana nokushisa kanye nokunethezeka kokunwebeka.
AmaShayina nawo aziveza nawo indwangu yelineni, ene-ecru drawstring ebhandeni kanye nemininingwane yentambo ehlukile ne-drawstring. Zikhululekile kakhulu futhi ziyahwamuka emihlanganweni yasehlobo.
Abakwazi miss abagijimi, njalo iguquguquka kakhulu kunoma iyiphi isizini. Yenziwe ngebhande elinwebekayo eline-drawstring kanye ne-stretch twill cuff. Ekwakheni kwabo abakwazi ukuphuthelwa amaphakethe wempahla asemaceleni, nakuba kamuva baba nenkinobho yokuvala ibhande elihambisana noziphu.
Amahembe Kuleli hlobo Banemikhono emide kodwa yenziwe ngekotini noma yelineni, noma kokubili inhlanganisela, ukuze bagqoke ngaphandle kokunikeza ukushisa okukhulu. Zakhiwe nge ukusika okujwayelekile okujwayelekile, enombhalo onemigqa nemibala ethambile ehambisana nomhlophe. Ngaphandle kokungabaza, singathola imibala ehlukahlukene, kusukela ehembeni elimhlophe kuye kwelimnyama futhi eminingi yayo ukuze siyigqokise. abayitoho, sporty shape nenhle.
Isikhathi sasehlobo sinikeza indlela Ama-espadrilles, eyenziwe ngendwangu kakotini kanye nenqwaba imibala eqinile nethulisiwe, ukufanisa konke ukukhethwa kwezingubo zasehlobo. Bala uqhubeke i-rubber sole kanye ne-jute yemvelo eqinisiwe kanye nezintambo zokulungisa unyawo esicathulweni.
Izicathulo zasemadolobheni Azikwazi ukushoda nazo, ezenziwe nazo izinto zikakotini eziphilayo futhi zifakwe ngaphakathi. Izigqoko zesithende kanye nesithende ziqiniswa ngenjoloba, okunikeza lokho kubukeka kwesithonjana kwengubo yasemadolobheni.
I-Casual Skate Shoe Ngenye yezicathulo ezifanele izinsuku ezishisayo. Zenziwe ngekotini futhi zinekhwalithi eyengeziwe, ucezu olulodwa olunomphumela wesikhumba ngemuva. Futhi bane-insole kakhokho yemvelo kanye nesoli yerabha enethoni eluhlaza.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Okuthrendayo kuleli hlobo lango-2022
Izimpawu zokukhangana phakathi kwabasebenzi osebenza nabo